Akụkọ - Họrọ igwe na -eweta ikuku oxygen dị ka ọrụ ngwaahịa si dị
Onye na -eme ka ikuku oxygen
Igwe na -eku ume/igwe na -eku ume
Nnwale ọsọ ọsọ nke Covid-19
Nyochaa Ọbara Ọbara
Họrọ igwe na -emepụta ikuku oxygen dị ka ọrụ ngwaahịa si dị
Nke mbu, site na nlebara anya ịta oxygen: Ugbu a, igwe dị n'etiti na nke dị elu n'ahịa na-ejikarị enyo enyo BD doro anya, ma nwee ngwaọrụ nleba anya oxygen nke ha maka nchọpụta, nke nwere ike lelee ikuku oxygen nke igwe ahụ n'ezie. oge. Ọ bụrụ na ị nwere ego ịzụta ọrụ a, ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ịnweghị ya. Ndị na -emepụta ihe mgbe niile ga -akpọ ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na mkpokọta oxygen dị ala karịa 82% dịka iwu obodo siri chọọ. A na -atụ aro ịzụta oximeter kama. Uru nke oximeter bụ ịmata ọkwa oxygen dị n'ahụ gị. Ọ bụrụ na ị na -ekuru ikuku oxygen, mana ahụ gị ka na -adịchaghị ahụ, ma ị chọpụta na uru ahụ pere mpe site na nnwale oximeter, ị nwere ike were ọgwụgwọ ozugbo. Dị ka ahụmịhe m si dị, nchọpụta ikuku oxygen nke onye na -etinye ikuku oxygen na -enye n'ozuzu oke. M na-ejikarị ngwa nnwale ndị ọzọ iji chọpụta mkpokọta nke ikuku oxygen. Nke abụọ, ọrụ atomization: akwadoghị ka iji atomization zụta atomizer. Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ịnwere ike ịzụta atomizer iche. 90% nke ndị mmadụ anaghị eji arụ ọrụ atomization.
Nke abuo, ọrụ bụ isi nke na -emepụta ikuku oxygen bụ ihe na -emepụta ikuku oxygen nwere ọrụ atomization. Nrụpụta atomization na nha urughuru adịghị ka arụmọrụ nke atomizer dị iche, mmịkọ nke onye ọrịa adịghị eju eju. Ihe kpatara ụlọ ọgwụ ji kwesị ijikọ ha ọnụ bụ n'ihi na njikọta ụlọ ọrụ dị mma maka ndị nọọsụ na ndị dọkịta ịgwọ ndị ọrịa. Ọ bụrụ na ị na -eji atomizer iji mebie onye ọrịa naanị ya. Akụkụ akwa ọ bụla ga -enwerịrị atomizer, nke ga -abawanye ibu ọrụ, nchekwa na ọnụ ahịa ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ ahụ sitere n'echiche nke njikwa dị mma na ịchekwa ọnụ ahịa, onye ọrịa kwesịrị ịgwọ ọrịa ahụ na mmetụta kacha mma. Tụkwasị na nke ahụ, onye na -emepụta ikuku oxygen nke otu ika na -enweghị atomization dị ọnụ ala. Kwà ahụ dị n'elu atụrụ. Ọ bụrụ na ịgbakwunye ọrụ atomization, ọ ga -abawanye ọnụ ahịa maka onye nrụpụta, ọnụ ahịa ahụ ka bụ nke gị. Tụkwasị na nke ahụ, igwe nwere ọrụ atomization nwere ọnụego ahịa dị elu karịa. Ekwesịrị ijikọ ndị na -emepụta ikuku oxygen nwere ọrụ atomization na oghere dị iche. Ọ bụrụ na interface adịghị mma, itinye uche na nrụgide onye na -emepụta ikuku oxygen agaghị ezu. N'ikpeazụ, ndị na -etinye ikuku oxygen na -ebubata enweghị ọrụ atomization. Kedu ihe kpatara na ikuku ikuku ikuku ebubata enweghị ọrụ atomization? Nkà na ụzụ ha ọ bụghị nke ọma ka nke anyị? Ee e, n'ihi na mgbe ha nyochachara, ha na -eche na arụ ọrụ atomization nke onye na -emepụta ikuku oxygen adịghị mkpa itinye ya na igwe na -emepụta oxygen.
Nke atọ, nnwale solubility oxygen ọbara: dabara maka ndị ọrịa nwere ọnọdụ ka njọ, na nleba anya ugboro ugboro, ndị ọrịa na-adịghị arịa ọrịa enweghị ike iji ọrụ a, ịzụta oximeter dị iche dị mfe karịa iburu, chekwaa na nwalee.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara igwe ikuku oxygen, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla. Hangzhou Gravitation Medical Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara na -ebubata ikuku oxygen
Anyị na -atụ anya ịghọ ike dị mkpa na ngalaba azụmaahịa ụwa ma mepụta usoro nke ụdị ewu ewu site na isoro ndị ahịa anyị na -eto.
Ụlọ 210, Ụlọ B, Qiantang 505, Nke 23 Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou City, Province Zhejiang, China, 310018